Booliska Minneapolis oo toogtay wiil Soomaali ah - Sidee wax u dhaceen? - Caasimada Online
Home Warar Booliska Minneapolis oo toogtay wiil Soomaali ah – Sidee wax u dhaceen?
Booliska Minneapolis oo toogtay wiil Soomaali ah – Sidee wax u dhaceen?
Minneapolis (Caasimada Online) – Ciidamada Booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa toogasho ku dilay wiil Soomaali ah, taasi oo horseeday dibad-baxyo.
Booliiska ayaa la sheegay inay rasaas oogan ku fureen gaari uu watay ninkaasi oo marayayey Minneapolis oo ka mid ah magaalooyinka ay ku badan yihiin Soomaalida.